Global Voices teny Malagasy » ‘Famoretana manahiran-tsaina mahazo ny fahalalahan-gazety’: Sakanan’i Pakistan ankitsirano ny Slate.com · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Febroary 2020 5:01 GMT 1	 · Mpanoratra Hija Kamran Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Mbola tsy fantatra ny antony nanakatonana  ny Slate tamin'ny volana jolay 2018  tamin'ny lohamilina Pakistaney. Araka ny tahiry  avy amin'ny Open Observatory of Network Interference (OONI), mbola nakatona indray ny gazetiboky tamin'ny volana jiona 2019 noho ny fitantarany ny Hetsika Pashtun Tahafuz  (PTM). Mitaky ny zon'olombelon'ny vondrom-piarahamonina Pashtonina ao Pakistan io hetsika io. Na izany aza, araka ny tahiry avy amin'ny NetBlocks, nanan-kery nanomboka ny 2 novambra 2019 izany fandraràna izany. Tsy nahazoana filazana na fanambarana avy amin'ny manampahefana ny momba izany fandraràna izany.
Araka ny fizarana faha-37  amin'ny lalàna fisorohana ny heloka bevava elektronika (PECA) tamin'ny taona 2016, dia nomena baiko ny hifehy, hanakana ary hanaisotra votoaty an-tserasera ny Fahefana Misahana ny Fifandraisandavitra ao Pakistan (PTA). Na izany aza, voatohitra tao amin'ny Fitsarana Ambony tao Islamabad (IHC) ny fahefan'ny PTA hanakana votoaty tsy misy fampilazana mialoha, namoaka didy  ny Fitsarana Ambony fa tsy ara-dalàna ho an'ny manampahefana ny hanakana votoaty an-tserasera raha tsy mandrafitra ny didy araka ny voatondro ao amin'ny Lalàna. Mbola mila mamolavola sy mamoaka ireo fitsipika voalaza ireo koa anefa ny PTA..
Nisedra fanivànana an-tserasera mihamitombo hatrany, ao anatin'ny ezaka lehibe ataon'ny manampahefana hifehy sy hampikombom-bava ireo feo manivaka ao amin'ny firenena, ny mpisera Pakistaney. Maromaro  ny trangan-tsivana an-tserasera ankarihary nolazaina nanakànana tranonkala iray manontolo na pejy na ampahany amin'ny tranonkala. Misy ihany koa ny raharaha voarakitra ofisialy ny fandrarana fitantarana na firesahana lohahevitra manokana na hetsika manokana toy ny filazana  ny Hetsika Pashtun Tahaffuz. Nisy ireo seho fahitalavitra notapahana ny fampielezana azy noho ny fanakianana ny politikam-panjakana, ary nosakanana tsy mahazo manao antsafa ireo mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra.
Mihamijotso hatrany isa-taona ny fahalalahana amin'ny aterineto sy ny gazety (ao Pakistan) araka ny tatitra Fahalalahana amin'ny Net  sy ny Fahalalahana amin'ny Gazety . Ao amin'ny firenena demaokratika toa an'i Pakistan izay ireharehan'ny  solontena ofisialy ny fahalalahan'ny gazety rehefa mahazo sehatra iraisam-pirenena, ny fikasana hanakombona ny tsy mitovy hevitra sy ny famerana ny fidirana amin'ny vaovao amin'ny alàlan'ny sivana tsy mitombina sady tsy ambara no mitaratra ny fihatsarambelatsihy amin'ny fomba fanapahan-kevitra demaokratika ao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/02/12/146439/
 volana jolay 2018: https://twitter.com/netblocks/status/1017428555406376960
 Hetsika Pashtun Tahafuz: https://en.wikipedia.org/wiki/Pashtun_Tahafuz_Movement
 fizarana faha-37: http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1472635250_246.pdf
 namoaka didy: https://digitalrightsmonitor.pk/ihc-directs-pta-to-provide-opportunity-of-hearing-before-blocking-online-content/
 Fahalalahana amin'ny Net: https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media
 Fahalalahana amin'ny Gazety: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/pakistan